Hordhac Jumlo 3T Macluumad Sare oo hal bam ah oo biyo ah oo leh qiime wanaagsan - EPONT EPONT
3T High Profile hal bamka sagxada sagxadda haydarooliga
Waxaan nahay Zhejiang Yipeng Machinery Co., Ltd. -- EPONT, alaabadayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 wadan sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo iwm. Macaamiishayada waxaa ku jira kuwo badan. Macaamiisha OEM ee ku takhasusay tareennada, baabuurta, fargeeto iyo mishiinnada dhismaha, waxaanu hore ula yeelanay iskaashi in ka badan 10 ka mid ah shirkadaha 500 ee ugu sarreeya adduunka oo ah mid ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha
1.Ma tahay shirkad toos ah wax-soo-saare ama shirkad ganacsi?
2. Goorma ayaa la aasaasay shirkadda?
1.Shirkaddu waxay dabooshaa aag 17000 mitir oo laba jibbaaran, shirkaddu waxay qaadanaysaa "sumcadda ku salaysan, tayada ugu horreysa" falsafada ganacsiga, si ay macaamiisha u siiyaan alaab tayo leh, si tartiib tartiib ah, oo ah sameynta sumcad wanaagsan ee warshadaha, miisaanka ganacsiga ayaa sii kordhaya. YIPENG rumayso ku biiristaada, waxaa jiri doona bari ka wanaagsan, rumayso YIPENG, dooro YIPENG, ku biir YIPENG, waxaanu ku siin doonaa adeega iyo dammaanadda ugu fiican.
2.Shirkaddu waxay ku qalabaysan tahay CNC lathe, mashiinka wax lagu shiidayo, mashiinka wax lagu shiidi karo, imtixaanka culeyska joogtada ah, mashiinka tijaabada culeyska firfircoon, tijaabiyaha Rockwell hardness tester, alxanka robot YASKAWA, farsamaynta feerka iyo qalabka tijaabinta, si ay u oggolaadaan tayada alaabta shirkadda iyo ilaalinta lagu kalsoonaan karo. godadka qaybaha muhiimka ah ee shirkadda - jack cylinder, gaar ahaan helitaanka mashiinka qodista laysarka si loo hubiyo saxnaanta achining ee meelaynta, godka xadka, si tayada wax soo saarku ay u ahayd boodbood tayo leh.
3.Our alaabta waxaa inta badan loo dhoofiyo in ka badan 30 dalalka sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo etc.Our macaamiisheeda waxaa ka mid ah macaamiisha OEM badan oo ku takhasusay tareenka, baabuurta, fargeeto iyo mishiinada dhismaha. Waxaan horeyba iskaashi ula yeelanay in ka badan 10 ka mid ah 500 ee shirkadood ee ugu sarreeya adduunka oo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha ugu waaweyn ee Shiinaha.
4.We have 4 khadadka wax soo saarka iyo 2 khadadka wax soo saarka kulaylka, Jack dhalada hal maalin laga yaabaa in aan soo saaro oo ku saabsan 5000pcs, oo ku saabsan jaakadda sagxada laga yaabaa in aan soo saaro 500pcs.
Alaabadayada waxaa inta badan loo dhoofiyaa in ka badan 30 dal sida USA, Germany, Japan, Spain, Italy, UK, Korea, Australia, Canada iyo etc.Our macaamiisheena waxaa ka mid ah macaamiisha OEM badan oo ku takhasusay tareenka, baabuurta, fargeeto iyo mishiinada dhismaha, waxaan waxay horeba ula lahayd iskaashi in ka badan 10 ka mid ah 500 ee shirkadood ee ugu sarreeya adduunka iyagoo ka mid ah alaab-qeybiyeyaasha waaweyn ee Shiinaha.
Su'aalaha Inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan sagxadda sagxadda oofwareenka
1.SIDEE ALAABTA NOOGU GUDBI KARAA?
2.Intee in le'eg ayaan heli karaa jawaab-celinta ka dib markaan u dirno weydiinta?
3. Goorma ayaa la aasaasay shirkadda?
2.Shirkadu waa ururinta wiishashka kala duwan ee Engine, Floor Jack 3T, Floor Transmission Jack kaas oo ah shirkad ku takhasustay cilmi-baarista, horumarinta, wax soo saarka iyo iibinta.